Jirama : naharitra 2.920 ora ny delestazy tamin’ny 2015 | NewsMada
Jirama : naharitra 2.920 ora ny delestazy tamin’ny 2015
Olana iray goavana niainana nandritra ny taona 2015, ny “delestazy”. Faritra 90 misy ny Jirama manerana ny Nosy nahita faisana tamin’izany avokoa. Nampikorontana ny fiaraha-monina, niteraka tsy fandriampahalemana ary indrindra nanapotika ny toekarena.
Nisy vondrona mpianatra niaraka tamina mpandraharaha vitsivitsy, nanao kajikajy, nahita fa nahatratra 2.920 ora ny faharetan’ny delestazy manerana an’i Madagasikara tamin’ny taona 2015. Mbola manatombo io tarehimarika io ny volana jolay hatramin’ny oktobra. Ambony noho io salanisa io koa any amin’ny faritra sasany, nahitana fahatapahan-jiro naharitra 12 ora isan’andro. Araka ny salanisa, maharitra hatramin’ny 8 ora isan’andro ny fahatapahan-jiro. Teto Antananarivo, ny volana aogositra sy septambra no tafakatra ambony indrindra, naharitra 8 na 10 ora isan’andro.
Isan’andro tsy maintsy nisy ny delestazy eto Antananarivo sy ny manodidina. Amin’ny faritra sasany, nanomboka amin’ny 7 ora maraina hatramin’ny 10 ora alina. Antony voalohany, rehefa nanomboka nihena ny rano mamatsy ny foibe any Andekaleka ; ho an’Antananarivo ihany sy ny faritra maro hafa, betsaka ireo milina mpamatsy herinaratra no simba, tsy nisy fikojakojana nandritra ny taona maro ary mifanandrify amin’izay fahasimban’ny milina izay ny tsy fahampian’ny solika mampandeha azy ireo noho ny trosa tsy voaloa.
Marihina anefa fa tsy nitsaha-nitombo ny fandaniana tamin’ny solika ho an’ny Jirama. Araka ny fanaraha-maso natao ny volana marsa 2015, niraisan’ny ao Mahazoarivo, Bianco ary ny minisiteran’ny Angovo, 165.000 litatra isan’andro ny solika lany namatsiana an’Antananarivo sy izay mifandray aminy fotsiny. 400 miliara Ar ny nanampian’ny fanjakana ny vidin’ny gazoala ho an’ny Jirama tamin’iny 2015 iny (150 miliara Ar tamin’ny 2014). Mazava loatra, tsy tonga any amin’ny mpanjifa ny vokatr’izany fandaniana mihoapampana rehetra izany. Mbola be lavitra noho ny vola lanin’ny fanjakana amin’ny fanabeazam-pirenena (117,6 miliara Ar) sy amin’ny fahasalamam-bahoaka (123 miliara Ar) ny lany tamin’ny Jirama raha jerena ny tetibolam-panjakana 2015.
Olana iray hafa, ny tsy fitoviam-pijery eo amin’ny sendikàn’ny mpiasa sy ny mpitantana na ny fanjakana. Ny fifanarahana amin’ireo sehatra tsy miankina mpamatsy ny Jirama. Tamin’ny taona 2015, nahatonga fitokonan’ny mpiasa ny volana aogositra ny fifanarahana tamin’ny Symbion Power niditra ao Mandroseza. 40 miliara Ar isam-bolana ny fandaniana amin’ny fanofàna milina amin’ny sehatra tsy miankina, miampy ny vidin-tsolika ! “Ampy tsara nahazoana nanamboatra ny milina ao amin’ny Jirama ny tetibola toy izany”, hoy ny mpiasa maro.